Ina-dhuubo oo Isaga oo Qol ku Dabran VOA Dabada Wax Uga Sheegay! – Rasaasa News
Jun 3, 2010 Ina-dhuubo oo Isaga oo Qol ku Dabran VOA Dabada Wax Uga Sheegay!
“Hadaan qufacay, oon qadhqadhay, oon qandhaday in ay qaaxo I hayso ma cidbaa qarinaysa”, in qaaraan la waayey, oo hoolalkii qaawan yihiin, oo qabiil qabiil loo kala joogo, oo ONLF qanacday qadaadkaygaan ka garataaye ma cidbaa qarinaysa, waa qosole Ina Qaaxo-dhuubo ma qolad buu ku jiraa mise qiraalkaan loo ogolayn “ONLF ma qaybsana”
Waxaan wax qarsoon ahayn oo qof waliba ogg yahay sokeeye iyo shisheeye in ONLF ay kala go,day oo ay leedahay laba dhinac oo mid waliba uu dhiniciisa u suxul duubo sidii uu ka kale uga guulaysan lahaa.
2009, ayey ahayd kolkii xubno muhiim ah oo ahaa ragii bud dhigaha u ahaa ururka oo ONLF, ay si qabiil ah ugu dileen koox wax ma garad ah oo ay soo hawl galiyeen 4 nin oo uu ka mid yahay Cadaani Hirmooge [Ina-dhuubo]. Arintaas oo si qabiil ah u dhacday ayna cadaysay baadhis madax banaan oo la sameeyey.
Arintaas ayaa waxay kala jabisay ururukii ONLF, oo maanta u kala taagan labo garab tan iyo xiligaasna isu qaba cadaawad xoog leh, ayaa waxay keentay in uu ururka awoodiisi ay buburto. Waxaana la waayey taageeradii dadweynaha, waxaana timid colaad beeleed oo siyaasadaysan, waxaana marmar badan dhacda is hujuun lagu sikto in uu bilowdo colaad sokeeye.
Waxaa hadaba, la yaab leh kolka uu Jwxo-shiil, inta uu lacag siiyo VOA, uu yidhaahdo Ina-dhuubow hadal in isna isdhexdhiga wax la yaab leh aan wax ka jiraa jirin. Arintaasi umma keenayso wanaag iyo magac Ina-dhuubo iyo kuwa hadal yidhi toona, waxaana xaqiiq ah in Isaga ka soo dirayaa uu yahay ninka Itobiya heshiiska la galaya ee uusan isagu ogayn.
Hore sidii aan u sheegnay Ina-dhuubo waxaa uu noqon doonaa ninka Ogadeenka ugu dambeeya ee ku dhiman doona dalka Eritrea, sababtuna waxaa weeye koley iyo koley Ina-dhuubo ha dhawaato ama ha dheeraatee waxaa dili doonta xabad dakane. Waana mid uu u doortay in uu ku dhinto Eritrea, isaga oo ka xun dameer baxkhtiyey.
Dr. Dola dhimashadiisii waata keentay in uu burburo ururkii ONLF, ee uu isagu Aabe iyo Hooyaba u ahaa. Itobiyana waxay sheegtay in hadii uu dhintay Dr. Dolal, in uu dhamaaday mucaaradkii ONLF, waaa sida ay dhaheene.
Waxaana xaqiiq ah sida aad waraysiyada ka dhagaysateen in garabka fashilmay ee u galaya Itobiya waliba isaga oo kala socda uu yahay ka uu Ina-dhuubo haatan ka daba dhutiyo.
Waxaan hubaa oo aan goodina ahayn in Dr. Dolal oo ahaa ninkii ugu wadanisanaa sabanadan dadka u kacay dalka Ogadeeniya, uguna aqoonta badanaa, in ayna fududayn in si sahal ah sanooyinkan lagu iloobo.
Cid kasta oo heshiis la gasha Itobiyan ama aan galin in ayna godobi kaga hadhaynin ee goor ay noqotaba laga gudi dambiileyaasha gardarada siyaasadaysan ku dilay Dr. Dolal.